Archive du 20170727
Fitondrana HVM Jadona hatramin’ny farany
Efa nampoizina ny zavatra mety hiseho amin’ny fanakanana hatrany ny hetsiky ny antoko Tiako I Madagasikara hankalaza ny faha-15 taona nijoroany eny Mahamasina ny 29 jolay izao.
Fifidianana 2018 Kandida maro hokendaina
Ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy Antoko Tiako I Madagasikara aloha izao no lasibatry ny antsojay politika sy ny jadon’ny fitondrana, saingy ho avy ihany koa ny an’ny manaraka.
Constant Raveloson “Tandindomin-doza ny demokrasia eto”
Nanaitra ny mpanara-baovao maro ny fanehoan-kevitra nataon’ny filoha nasionalin’ny antoko Hery Vaovao hoan’i Madagasikara.
Kaominina Andohabato Sambany novangiana mpitondra
Sambany no nisy tompon’andraiki-panjakana tonga nitsidika tao amin’ny kaominina Ambanivohitra Andohabato, distrikan’i Betioka, raha ny vaovao voaray avy any an-toerana.
Fanaratsiana an-dRavalomanana Hanokanana tetibola manokana ?
Fanjakan’ny malemy sy halam-bahoaka no misy eto, ka zary ataon’ny mersenera politika fitangosam-bola.
Mpiraki-draharahan’ny Fitsarana Nivoaka ny andiany « Ny Avo » miisa 98
Notanterahina omaly alarobia 26 jolay 2017 teny amin’ny CCI Ivato ny lanonam-pamoahana tamin’ny fomba ofisialy ireo mpiraki-draharahan’ny Fitsarana andiany faha-17,
Sehatry ny fambolena Ho avy ny traktera 1.000 avy any Inde
Niverina indray ny fanafarana traktera tahaka ny efa nataon’ny fitondrana Ravalomanana.
Taxi-ville sandoka « Fourrière » 10 andro avy hatrany
Raikitra ny fanenjehena ireo fiarakaretsaka tsy manara-dalàna miasa eto an-drenivohitra tanterahin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra na ny « Operation taxi ».
Vanim-potoan’ny fialan-tsasatra Ilaina ny fiarahan’ny fianakaviana mitokana kely
Tafiditra tanteraka ao anatin’ny fialan-tsasatra lehibe isika ankehitriny. Tsy vitsy ireo miala kely misitaka ny renivohitra noho izany na dia andro vitsy monja aza mba hamalifaliana ny ankohonany.
Smile party Ho raitra ny feo sy hazavana
Ho fetin’ny feo sy hazavana, araka ilay hiaka filamatra efa nitondrana azy tokoa rahampitso
Apokalipsy 1000 ny fiangonana, 1 tapitrisa ny mpino
Fotoan-dehibe ho an’ny fiangonana Apokalipsy tarihin’ny Pastera Mailhol na Atoa André Christian Dieu Donné ny datin’ny 05 Aogositra ho avy izao.
Rahoviana ihany ny mpitondra antsika vao hijery ny hoavin’ity firenena ity ? Lasa miharihary toy ny vay an-kandrina nanomboka tamin’ny taona 2009 fa noho ny fialonana olona iray no hanaovan’ireo mpitondra nifandimby antsojay antoko politika sy mpitarika.
Nofo mangatsiakan’i Régis Gizavo Hiazo an’i Toliara anio
Tonga tetoan-tanindrazanaomalymarainanynofomangatsiakan’ilaympanakantoMalagasy malaza eran-tany Régis Gizavo.
Fanafihan-jiolahy teny Andraisoro Tovolahy iray voatifitra teo amin’ny lohany
Tsy nifandrenesana ny feom-basy teny Andraisoro ny takarivan’ny talata 25 jolay teo, tokony ho tamin’ny 6 ora hariva.
Fanenjehana jiolahy Miala bala ny polisim-pirenena ?
Nanao tatitra tamin’ny asa vitany ny polisim-pirenena omaly ka nampahafantatra fa olona 417 no naiditra am-ponja hatramin'ny volana jona no nankaty. Fitaovam-piadiana toa ny grenady, basy kalachnikov sy PA no azo tao anatin'izany.